राष्ट्र बैंकको प्याकेजः ३० लाख नगद हुनेले १ करोडको घर किन्न सक्ने
राष्ट्र बैंकको प्याकेजः ३० लाख नगद हुनेले १ करोडको घर किन्न सक्ने २ करोड १४ लाखसम्मको घर किन्नेले ३० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरे हुने
शिलापत्र संवाददाता काठमाडौं, २१ कात्तिक
तपाईंसँग घर वा अपार्टमेन्ट केही पनि छैन र यसअघि घर वा अपार्टमेन्ट किन्न वा बनाउन बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनु भएको छैन भने बैंकबाट विशेष सुविधासहितको ऋण पाउनु हुन्छ ।
सबै नेपालीले घर बनाउन वा किन्न सकून भन्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष सुविधासहितको योजना ल्याइदिएको हो । राष्ट्र बैंकको सुविधासहितको ऋण लिन आफूसँग घर वा अपार्टमेन्ट नभएको व्यक्ति हुनुपर्छ । यस्तै, यसअघि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर घर वा अपार्टमेन्ट किनेको वा बनाएको व्यक्ति भने हुनुहुदैन ।
राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक घर खरिद गर्ने व्यक्ति (फस्ट होम बायर) लाई लक्षित गरी नयाँ योजना ल्याएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार २ करोड १४ लाख रुपैयाँसम्मको मूल्यांकन हुने घर वा अपार्टमेन्ट किन्दा ३० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरे हुनेछ । किनभने राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवाशीय घर कर्जामा धितो मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म ऋण बैंक वा वित्तीय संस्थाले दिन पाउनेछन् ।
तपाईंले २ करोड १४ लाख रुपैयाँको घर वा अपार्टमेन्ट किन्नुभयो भने त्यसको ७० प्रतिशतले हुन आउने १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋण दिनेछ । बाँकी ६४ लाख रुपैयाँ भने तपाईंले बैंकमा बुझाउनु पर्नेछ । यस्तै, १ करोड रुपैयाँको घर किन्दा तपाईंले जम्मा ३० लाख रुपैयाँ बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दिए हुन्छ । बाँकी रकम सोही बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणको रुपमा तपाईंलाई दिनेछ ।
यसअघि घर वा अपार्टमेन्ट किन्न धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण लिन पाइन्थ्यो । यस्तो कर्जा लिएका ऋणीले आफ्नो आम्दानीको स्रोतको रुपमा घरभाडालाई देखाउन भने पाउने छैनन् ।
यो ऋण घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्नेहरुका लागि अर्काे सजिलो पनि छ । त्यो सजिलो के हो भने ऋण लिएपछि बैंक वा वित्तीय संस्थाले ब्याज बढाए भने पनि किस्ता भने बढ्ने छैन ।
कस्ता घर आउँछन् २ करोडसम्ममा ?
राष्ट्र बैंकले गरेको यो व्यवस्था अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित शहरी क्षेत्रमा चलेको आवाशीय घरको मूल्य अनुसार नै हो । किनभने घर बनाएर विक्री गरिरहेका कम्पनीहरुको घर नै डेढ करोड रुपैयाँसम्ममा आउने गरेका छन् ।
सिभिल होम्सले काठमाडौंको सितापाइलामा बनाएका साढे २ आना क्षेत्रफलको २ तले घरको मूल्य १ करोड ६० लाख रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तो मूल्यमा केही कम हुन सक्छ । यस्तै सितापाइला र गोदावरीमा साढे ३ आना क्षेत्रफलमा बनेको घर १ करोड ७० लाख र ४ आना क्षेत्रफलमा बढेको घर १ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्ममा आउने कम्पनीले जानकारी दियो । अन्य कम्पनीहरुले पनि डेढ करोडदेखि २ करोड रुपैयाँसम्ममा आवाशीय घर विक्री गरिरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २२, २०७६, ०४:३३:००
वित्तीय संस्थाले दुर्गममा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ: मन्त्री ज्वाला
गभर्नर नेपाल भन्छन्, ‘नेपालीले पैसा चिनेनन्’
मुक्तिनाथ बैंक र रेमिट टु नेपालबीच सहकार्य
नेविसंघका नेतावीचको झडपपछि रणभूमि बन्यो कांग्रेस मुख्यालय
प्राध्यापकलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनीः राजनीति गर्ने हो भने मसँग आउनुहोस्
ज्ञानीमैयासँगै अस्ताउला कुसुण्डा भाषा ?
नेप्सेमा २४ अंकको वृद्धि
कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारको निर्देशन
संयोजकलाई थाहै नदिई बनाइयो नयाँ पाठ्यक्रम